Scratch yeLinux. Scratux nedzimwe nzira - Ikkaro
kudzidziswa >> Software >> Linux >> Kukwenya kweLinux (Scratux Ubuntu)
Ndinotanga kutamba Scratch uye ndinoona nekusemeswa kuti variko desktop application yeWindows, MacOS, ChromeOS uye Android app asi hapana yepamutemo application yeLinux.
Paive neapp yeLinux uye vakaimisa. Mharidzo yako ikozvino
Parizvino, iyo Scratch App haienderane neLinux. Tiri kushanda nevanopa uye yakavhurika-sosi nharaunda kuti vawane nzira yekuti Scratch ishande paLinux mune ramangwana. Gara uchiziva!
Ichokwadi kuti vhezheni yepamhepo inogona kushandiswa kubva kubrowser. Asi ini ndinoda maapplication edesktop nekuti ane mukana wekuti isu tinogona kuramba tichiashandisa kunyangwe tisina Internet yekubatanidza uye kuti kana tichida kutarisa pabasa tinogona kuvhara bhurawuza nezvimwe zviuru zvematabo, izvo zvinogara zvichikanganisa. .
Asi senguva dzose kune dzimwe nzira. Mushure mekurumbidza akati wandei pa Twitter ndafunga kuyedza scratux.
Iyi desktop application yeLinux yakangofanana neiyo online vhezheni yeScratch. Isu tinotova neakawedzera akafanana semuScracth.
Ichokwadi kuti isu hatigone kupinda nekuyananisa mapurojekiti, chimwe chinhu icho Handizive kana zvichigona kuitwa nemashandisirwo ari pamutemo paWindows, macOS uye ChromeOS, asi patinochengetedza mapurojekiti edu anochengetwa mu .sb3 inova fomati yeScratch uye tobva tapinza mapurojekiti iwayo muScratch online.
Kune rimwe divi, zvinonetsa kana tichida kuva chikamu chenharaunda. Kufambisa mapurojekiti kubva pamhepo kuenda padesktop uye zvinopesana imhirizhonga, asi kana iwe uchigara uchishanda pane application hazvizove dambudziko kwauri.
Tinoona kuti zvakatipoteredza uye zvingabvira zvakafanana.
Maitiro ekuisa Scratux
Unogona kuzviita kuburikidza neiyo github https://github.com/scratux/scratux kwatinoona zvidzitiro zvinoshanda muUbuntu, muManjaro uye muFedora.
Kana kuisa na Snap
Handisati ndawana dzimwe nzira dzinoshanda panguva ino.
Ichokwadi kuti kune akasiyana software ekushandisa Scratch muLinux asi yakatarisana nehurongwa muArduino, asi haisi Scratch clones seScratux iri.
Kana iwe uchiziva nezveimwe nzira, siya mhinduro uye ini ndichaiongorora.
Maitiro ekuisa APK kunyorera pane Android
Anaconda Tutorial: Chii icho, maitiro ekuiisa uye maitiro ekuishandisa
Categories Linux, Software Kubatikiti kufamba
2 Maitiro ekuisa Scratux